Hadal heynta Xayawaanka Diin-diinka ee Muqdisho | Radio Baidoa
Guriga Wararka Maanta Hadal heynta Xayawaanka Diin-diinka ee Muqdisho
Hadal heynta Xayawaanka Diin-diinka ee Muqdisho
Muqdisho maalmahan dambe waxaa ku soo badatay hadal hayn ah in Diinka ama Diidiinka uu noqday Qaali, iyadoo qaybaha kala duwan ee Bulshada ay si wayn u hadal hayaan sheekada ku saabsan Diinka.
Goobaha Bulshada ay isugu yimaadaan ayaa si wayn looga hadal hayaa sheekada la xiriirta Diinka iyo inuu qaali noqday oo dad ay ku iibsanayaan qarash aad u fara badan.
Sheekooyinka la yaabka leh ee Magaalada Muqdisho lagu arkay ayaa waxaa ka mid ah Diinka in lagu kala iibsanaayo lacag ka badan 50 kun oo doolar, balse Diinkaasi lacagta laga bixinaayo Shuruud ayaa la socota.
Shuruuda ayaa waxa ay tahay in Diinka uu noqdo mid marka la dul saaro taleefoonkaaga gacanta uu damaayo, waana midka loo baahan yahay oo lacagta badan lagu kala iibsanaayo, balse lama oga sababta taleefoonka gacanta uu u damaayo marka laga agdhawaado Diinka.
Shuruudo kale, ayaa waxa ay tahay in Diidiinka loo baahan yahay uu yahay mid anteenada ay ka tageyso Taleefoonkaaga gacanta, marka la dul saaro Diinka.
Shuruudo saddexaad ayaa waxa ay tahay in fure ama bir haddii loo dhaweeyo ay ku dhageyso dusha xayawaanka Diinka, haddii dhamaan astaamahan lagu arko waa midka loo baahan yahay Diinka, balse astaanta ugu muhiimsan ee lacagta badan lagu kala iibsanaayo Diinka ayaa ah midda taleefoonka damaayo.
Maxamed Yuusuf Xaayow oo dalaal ka ah, kala iibinta Diidiidanka, ayaa sharaxaad ka bixinaayo lacagta Diinka lagu kala iibsado iyo astaamaha lagu xusho, isaga oo sheegay in Diinka qarash badan lagu kala iibsado.
Waxaa suuragal ah sanado badan inaad arkeysay Diidiinka oo agtaada maraya ama gurigaaga ku nool, balse sidee ayaad ku aaminaysa sheekada la xiriirta in Diidiinka uu hadda qaali ka yahay Magaalada Muqdisho.
Markii ay soo baxday sheekada Diidiinka ku saabsan, dad badan ayaa damac galay oo xittaa bilaabay raadinta Diidiinka si un ay lacag uga helaan, haddii uu noqdo midka loo baahan yahay.
Ajaanib ku sugan Magaalada Muqdisho ayaa la sheegay inaya ka dambeeyaan qorshaha uu qaaliga u noqday Diinka, waxayna dantooda tahay inay qalaan, kadibna ay ka soo dhex saaraan Jawharad ay ku iibsanayaan qarash badan.